Xaafadaha Seattle: Brighton Beach – Taariikh Kooban - HistoryLink.org
Xaafadaha Seattle: Brighton Beach – Taariikh Kooban
Brighton Beach waa xaafad ku taal Lake Washington koonfur-bari Seattle. Waxay koonfur kaga began tahay Bailey Peninsula (hooyga Seward Park) waxay ka soo fiddaa harada Graham Hill, ka gudubtaa Rainier Valley, oo fanataa dhinaca Beacon Hill, sida qaalibka ah inta u dhaxaysa S Othello Street dhinaca koonfurta iyo S Orcas Street waqooyiga. Muhaajiriinta Ingiriiska ah ee iibsaday dhulkii halkaas ahaan 1880dii ayaa ku magacaabay xaafadda magaalo dalxiis oo Inglaan ku taala. Taa kahor meeshu waxay hooy u ahayd Hindida Duwamish kuwaasoo ku lahaa tuulo la odhan jiray hah-HAO-hlch (“meel la xarrimay”) koonfurta Bailey Peninsula, dabadeedna ay yeesheen degeyaashii jarjaray geedihii waawaynaa, dhisay beeraha, bustaanada, iyo dugsiyada, oo sawiray dhulka guriga. Dhammaystirkii 1891 tareynka korontada ee rakaaba ee ku dhaadhacayey Rainier Valley ilaa iyo Magaalada Columbia wuxuu u furay Brighton Beach horumar badan. Xaafadda iyo kuwa ku qabsani waxa lagu daray Seattle 1907. Magaaladu waxay dhistay Garoonka Brighton 1930dii Dugsiga Sare ee Sharples Junior-na waxa markii dambe laga dhisay halka ku xigta garoonka. Sannadadii ku xigay Dagaakii II ee Adduunka qoysas Afrikaan Maraykana ayaa ka soo guuray Meelaha Dhexda koonfurta hoose ee Rainier Valley. Brighton Beach iyo Seward Park waxay sidoo kale xarun u noqdeen bulshada Yuhuuda ah ee Seattle, oo leh saddex gole oo Yuhuuddu ku kulanto qiyaastiina boqolkiiba 90 dadkaYuhuudda Assal-raaca ah ee magaalada.